Iindaba -Uzenza njani iiSilinda zeHydraulic
Isilinda hydraulic, enyanisweni, yinxalenye yezixhobo zoomatshini. Kuya kufuneka ihlangabezane neemfuno zokuqhutywa, ukubetha, indawo yokufaka kunye nobungakanani bokufakwa kwesixhobo sonke. Ulwakhiwo olukhethekileyo lomatshini wolwakhiwo, umda wesilinda ungqongqo kakhulu.
Emva kokumisela umtsalane (amandla okutsala), ukubetha, isantya sokuhamba kunye nemowudi yofakelo lwesilinda seoyile, uxinzelelo olulinganisiweyo kunye nenqanaba lokuhamba kwempompo yeoyile ephambili, uxinzelelo kunye nokuqhutywa kwesilinda seoyile kumiselwe, kunye nobubanzi bangaphakathi oyilinda oyile uzimisele. Isantya kunye nobubanzi bangaphakathi besilinda yeoyile kumisela inqanaba lokuhamba kwempompo yeoyile.
Ukuba uyayazi ububanzi obungaphakathi, uxinzelelo olusebenzayo, ukubetha kunye nendlela yoqhagamshelo lwesilinda yeoyile, unokukhetha uhlobo. Kukho imigangatho kazwelonke yesilinda seoyile, kwaye imodeli esetyenziswa ngokuqhelekileyo ibizwa ngokuba yibhayilinda esemgangathweni.
Umzekelo, ngokokujongwa kweetoni ezi-4, kungabalwa ukuba uxinzelelo lwe-Bai lwesilinda yeoyile luyilelwe ukuba lubengu-8Mpa, ubukhulu besilinda seoyile singama-80, kwaye imodeli yesilinda yeoyile ingama-80 * 40 * 300-8mpa. Uhlobo lwesilinda lwentonga lunokusetyenziswa ngexabiso eliphantsi kunye nokulondolozwa okufanelekileyo.Ukuba uxinzelelo olusebenzayo lwesilinda seoyile yi-16MPa, ububanzi bangaphakathi besilinda yeoyile ngama-60, kwaye imodeli yesilinda yeoyile ingama-60 * 35 * 300-16mpa , kwaye uhlobo lwe-welding okanye uhlobo lokutsala lunokusetyenziswa.Kucetyiswa ukuba udibanise uxinzelelo lwenkqubo yezixhobo zoomatshini ukumisela uxinzelelo olusebenzayo lwesilinda seoyile kuqala. Ukuba izixhobo zoomatshini zigqityiwe, uxinzelelo lwenkqubo kufuneka lube sezantsi, zihlala zingaphantsi kwe-5MPa. Ukuba izixhobo zoomatshini zirhabaxa ngomatshini, uxinzelelo lwenkqubo kufuneka lube ngaphezulu
Nangona kunjalo, imigangatho yesilinda yeoyile mininzi kwaye ayilunganga, kubandakanya imigangatho yesizwe, imigangatho yoMphathiswa woomatshini, kunye nemigangatho eyahlukeneyo yeshishini. Umgqomo wesilinda, ukutywina, uqhagamshelo kunye neendlela zovavanyo lwesilinda seoyile zinemigangatho yazo. Eyona ndlela ilungileyo kukubonelela ngokuzoba kumzi-mveliso.